संघर्ष, लगनशीलता र मिहिनेतको प्रतिफल : उर्लावारीका युवा रोशन तिम्सिनाको सफलता कथा - Kathmandu Express
संघर्ष, लगनशीलता र मिहिनेतको प्रतिफल : उर्लावारीका युवा रोशन तिम्सिनाको सफलता कथा
काठमाडौं- काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित ग्लोबल कम्प्युटर ट्रेड र ग्लोबल कम्प्युटर सेन्टर नाम गरेका दुई वटा कम्पनी छन् । यी कम्पनीले उपत्यकाका संघसंस्थादेखि सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई कम्प्युटर,प्रिन्टर तथा अन्य एसोसेरिसको सप्लाइ गर्दै आएको छ ।
विगत १७ वर्षदेखी ग्लोबल कम्प्युटर सेन्टरले नेपालमा कम्प्युटर र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण हार्डवेयरको कारोबार गर्दै आएको छ । वार्षिक करोडौंको कारोबार गर्ने यो कम्पनीमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरेर करिब सयजनाले रोजगारी पाएका छन् । यी कम्पनीले उपलब्ध गराउने कम्प्युटर तथा हार्डवेयरहरु देशका विभिन्न कुनाकाप्चामा प्रयोग भइरहेका छन् ।
मोरङ उर्लावारीका रोशन तिम्सिना यी कम्पनीका सञ्चालक हुन् । २०५७ सालमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका उनके अथक मिहिनेत,लगाब अनि परिश्रमका कारण उनले कम्पनीलाई यो मुकामसम्म ल्याएका हुन् ।
पढाइसँगै जागिर खाँदै काम गर्न भनेर २०५७ सालमा काठमाडौंमा छिरेका तिम्सिना अहिले रियल स्टेट,सेयर बजारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सफलतामा हासिल गरिरहेका छन् । योग्यताका लागि पढाइ र समृद्धका लागि बिजनेस गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
साविकको उर्लाबारी गाविस-७(हाल उर्लावारी नगरपालिका-२) देविझोडाका रोशन तिम्सिनाले काठामाडौं बसाइको करिब २ दशकमा व्यापार व्यवसायमा सफलता हासिल गरेका छन् । तर कसरी ? उनी भन्छन्,’निरन्तरता, लगानशीलता,इमान्दारिता र संघर्ष ।’
रोशनको घर उर्लावारीको मंगलबारेस्थित देविझोडा । उनका बुवाका ६ सन्तान । उनी घरका कान्छा छोरा । कान्छा छोरा सबैको प्यारो हुनुपर्ने हो तर अभावमा बित्यो । पारिवारिक अवस्था सामान्य नै थियो । बुवाको सरकारी जागिर भएपनि ६ जना सन्तान पाल्न मुस्किल हुन्थ्यो । खेती त थियो तर अपुग ।
मंगलबारेको सुनपकुवा माविबाट,दमक बहुमखी क्याम्पसमा आइकम र महेन्द्र मोरङमा बीकम हुँदै उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं पुगेका हुन् ।
व्यापार व्यवसायमा आउनु अघि उनलाई प्रहरी सेवामा लाग्ने सपना थियो । माओवादी द्वन्द्वका कारण देशमा प्रहरी सेवामा आकर्षण थिएन। असईमा लिखित नाम निकालेपनि उनले परिवारिक दबाब र देशको परिस्थितीका प्रहरीको जागिर खाएनन् ।
साथीभाइसँगको सहकार्यमा सुनौलो भविष्य खोज्नका लागि भनेर काठमाडौं गएका रोशनको नाम हरेक जसो हुने सामाजिक कार्यहरुमा आउने गर्छ ।
काठमाडौं बसाइको सुरुवाती दिन उनको सुःखद रहेन । दुःखै दुःखमा बित्यो । कोचिएर एउटा कोठा धेरै साथीहरुसँग बस्नुपर्ने बाध्यता,जागिर नपाएर भौंतारिनुपर्ने अवस्था अनि जागिर पाएपनि तलब नपाइने समस्या ।
धेरै ठाउँहरुमा काम गर्दा उनलाई तलब दिइएन । तलब र जागिर नपाएपछि एक हिसाबले उनमा निराशा छाएपनि हरेश भने खाएनन् । जागिर खोजिरहे ।
५९/६० सालतिर उनी न्युरोडस्थित म्ट्रेस व्यवसाय गर्ने एउटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्न थाले । उक्त कम्पनीमा काम गर्दा उनको तलब २५ सय रुपैयाँ थियो । साथीभाइहरुलाई तलब सुनाउन लाज लागेर उनले अलिक बढाइचढाइ रकम भनिदिएका थिए । त्यही भएर उनलाई फोन आइरहन्थ्यो । काम गर्ने कम्पनीमा उनको साथीहरुको धेरै फोन आउन थालेपछि सञ्चालक झर्किएका थिए ।
दिनमा ४/५ कल फोन कम्पनीको ल्यान्ड लाइनमा आउन थालेपछि सञ्चालक उनीप्रति रिसाउँदै ‘धेरै फोन आउनेले छुट्टै आफ्नो कम्पनी खोल्नु नि’ भनेर झर्किएको रोशनले सुनाए । उनी भन्छन्,’कम्पनी सञ्चालकको उक्त वाक्य मेरो जीवनका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । ममा लुकेर बसेको व्यापार व्यवसाय गर्ने सोचलाई मलजल गर्यो । त्यसबेला मलाई चित्त पनि दुखेको थियो तर मैले अठोट गरेर मैले किन मेरो छुट्टै व्यापार नगर्ने भन्ने सोच पलायो । ‘
स्नातक पढ्दै गर्दा उनलाई व्यापारको भूत सवार भयो । बीचमा पढाइ ग्याप भएपनि उनले कम्प्युटुर,आईटीलगायत इलेक्ट्रोनिकल सामानहरुबारे जानकारी र सिक्ने काम गरिसकेका थिए । विभिन्न तालिमहरु पनि लिएका थिए । नेपालमा पनि भर्खरै इलोक्ट्रोनिक बजारले आकार लिँदै थियो ।
त्यो समयमा मोबाइल बोक्नु ठुलो कुरा हुन्थ्यो । कसैले कानमा मोबाइल राखेर कुरा गर्दै हिँड्दा धेरैले फर्किफर्की हेर्थे । कम्प्युटर नेटवर्क बिजनेसमा लाग्दा मोबाइल फोनको आवश्यक देखेपछि उनले सेकेन्ड ह्यान्ड एउटा ब्ल्याक एन्ड वाइट मोबाइल किने । १४ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा पैसा नेपाल टेलिकममा डिपोजिट गरेर सिम कार्ड किने । उनको पुँजी पनि त्यही थियो । त्यसपछि उनले कम्प्युटर नेटवर्कीङको व्यापार गरे ।
मोबाइल फोन बोक्ने मान्छे भनेर उनलाई धेरे व्यपारीहरुले बाँकी पत्याए । सामान दिन्थे । अनि रोशन त्यही सामान अरुलाई बेचेर बाँकी तिर्थे अनि नाफा कमाउथे । रोशन सम्झन्छन्,’ किन हो किन मोबाइल बोक्दा त्यसबेला मानिसहरुले हेर्ने नजर नै फरक थियो । मभन्दा धेरै ठूलो कारोबार गर्नेहरुसँग मोबाइल थिएन । उनीहरुले विश्वास गर्न थाले । मलाई बाँकीमा सामानहरु दिन थाले ।’
उनी भन्छन्,’ मसँग त्यो बेला एकपैसा पनि थिएन । बजारबाट सामान उठाए अफिसमा दिन्थेँ ।’ कम्प्युटर र आईटी सम्बन्धीका कोर्सहरु गरेकाले उनलाई बजारमा सामान चिन्न र गुणस्तरबारे थाहा पाउँदा उनले धेरै कठिनाई झेल्नुपरेन ।
व्यापार थालेको पहिलो महिनामा उनले १८ हजार कमाए । यो पैसा भनेको उनले अघिल्लो जागिरमा काम गर्दा कमाउने ७ महिनाको तलब थियो । रोशन हौसिए । खट्न थाले अनि व्यापार बढ्दै गयो ।
‘यो व्यवसाय मैले रहरभन्दा पनि आवश्यकता र जीविकोपार्जनका लागि सुरु गरेको थिएँ तर सफलता हासिल गरेर यो आवस्थामा आउँछु भन्ने थिएन,’ उनले भने । कारोबार बढ्दै गएपछि उनले कम्‍पनीको आवश्यकता देखे । अनि उनले ग्लोबल कम्प्युटर सेन्टरको स्थापना गरे । संघर्षका दिन डिल्लीबजारमा सुरु भएकाले अफिसमा पनि त्यही खोले ।
देशमा गणतन्त्र आएसँगै उनले आफ्नी प्रेमिका सोभा सापकोटासँग लगनगाँठो कसे । श्रीमतीलाई पनि यो व्यवासयमा लाग्न प्रेरित गरे । ग्लोबल कम्प्युटर ट्रेड श्रीमतीको नामबाट सञ्चालन गरेर उनले व्यापार विस्तार गरिरहेका छन् । योबीचमा उनले रियल इस्टेड,कम्प्युटर ट्रेड,घडेरी,सेयर मार्केटको क्षेत्रमा पनि लगानी गरे । यी क्षेत्रबाट उनका लागि थप आम्दानीको स्रोत बन्यो ।
विगत र वर्तमान हेर्दा उनी कुनै पनि कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । काठमाडौंको पेप्पसीकोलामा बस्दै आएका रोशन कुनै पनि काममा इमानदारिता,लगनशीलताका साथ मिहिनेत गर्ने हो भने सफलता हासिल गर्ने बताउँछन् । ‘म चाही अपवादमा पर्छु होला जसको सुरु व्यापारबाटै नाफा कमाउन थाल्यो । प्रायः व्यापारमा सुरुमै राम्रो नहुन सक्छ तर कालान्तरमा त्यसले प्रतिफल दिन्छु । हरेश खानु हुँदैन । ‘
युवाहरु विदेशिनुभन्दा स्वदेशमा केही काम गर्न उनी सुझाव दिन्छन् । स्वदेशमा काम गरेर विदेशमा चाही डुल्न जाने र विदेशीहरुलाई नेपालमा ल्याएर जागिर खुवाउनुपर्ने सपना देख‍्न उनी सुझाउँछन् । ‘नेपालमै आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सकिन्छ भने विदेश किन जाने ?,’ रोशन प्रति प्रश्न गर्छन् । काममा इमान्दारिता देखाउन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
व्यापार व्यवसायलाई उनी विस्तार गर्ने क्रममा छन् । हाल उनी क्यानेडामा आफ्नो व्यापार फैलाउने सोचमा छन् । उनी त्यहाँबाट पनि आफ्नो व्यापारालई विस्तार गरेर नयाँ उचाइ दिने ध्यानमा छन् । उनी भन्छन्,’सधै विदेशबाट आयात गरेर सामान ल्याउनुभन्दा किन विदेशमै व्यापार विस्तार नगर्ने ? ‘ रोशनको कम्पनीले नेपाल,भारत र चीनबाहेक बई,कतार,इजरायल,कोरिया,अमेरिका, सिंगापुरलगायतका मुलुकहरुबाट पनि सामान आयात गर्छ । उनी व्यापारका दौरान एसियाका अधिकास मुलुक,युरोपका दर्जनबढी मुलुक,अमेरिका,क्यानाडालगायतका मुलुकहरुको भ्रमण गरिसकेका छन् ।
रोशनको सक्रियता व्यापार व्यवसायमा मात्रै नभएर सामाजिक क्षेत्रमा पनि छ । किवानिज र लायन्स क्लबमा उनी आबद्ध छन् । लायन्स क्लबको सयौं वर्षिकोत्सव सम्मेलनमा उनी स‌ंस्थाको प्रतिनिधि भएर अमेरिकासम्म पुगेका छन् । लायन्स क्लब अफ काठमाडौं कालिकाका पूर्व कोषाध्यक्ष उनी किवानिज क्लबको इमिडेट पास्ट प्रेसिडेन्ट हुन् ।
सामाजिक क्षेत्रमा उनको सक्रियतामा काठमाडौंमा मात्रै नभएर जन्मथलो उर्लावारीमा उस्तै छ । उर्लावारीका कोही मानिहसरु बिरामी हुँदा होस् या अन्य कुनै शुभ सामाजिक कार्य गर्दा नै किन नहोस् उनी सहयोग गर्ने पहिलो पंक्तिमा हुन्छन् । लकडाउनमा पनि उनले उर्लावारीमा खाद्यान्न वितरण अभियानका क्रममा सहयोग गरेका छन् । गाउँमा बिरामी पर्दा र आवश्यक परेको खण्डमा उनी सधै आर्थिक र नैतिक रुपमा सहयोग गर्न अगाडि हुन्छन् ।
जीवनमा सफलता पाउनका लागि काममा इमान्दर र मिहिनेत चहिने उनी बताउँछन् । व्यापारमा सफलता हासिल गर्न ग्राहकसँग गर्ने व्यवहार राम्रो हुनुपर्ने,सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्ने, व्यापारमा हुने लेनदेन कारोबार समयमा तिरे सबैले विश्वास गर्ने र विजेनेसमा हरेश खाएरभन्दा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसले एकदिन पक्कै सफलता हासिल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले युवा पस्ताहरुलाई लगानी गर्न र आयमुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै कुनै पनि काम गर्दा सुरुमा सफलता हासिल भएन भनेर नछाड्न पनि आग्रह गरे । लागेकोलाग्यै गर्दा एकदिन सफलता अवश्य हासिल हुने रोशनको अनुभव छ । यसका लागि सधै इमान्दारिता र लगनशील भएर काम गर्न उनले सुझाव दिए ।
Previous articleश्रीलङ्कामा इनार खन्दा फेला पर्‍यो ‘१० करोड डलर पर्ने एउटा विशाल नीलमणि’
Next article५ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाको बुद्धि पलाएन, हुन त बुद्धि भए पो पलाउँथ्यो- गोविन्द केसी